Ambohidratrimo - Lehilahy iray hita faty, ahiana ho nisotro poizina
Nisavorovoro ireo mponina teny Marobiby Ankadindravola, Kaominina Ivato Distrikan’ Ambohidratrimo tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo iny. Fatina tovolahy iray tombanana ho 25 taona no hita teny akaikin’ny tanimboly iray teny amin’ny manodidina. Nahitana tavoahangy plastika nisy ambin-dranom-boankazo sy tavoahangy nisy poizina teo akaikiny.
Teo alohan’izay anefa dia efa nisahotaka ny fokonolona satria natahotra mafy izy ireo sao matin’ny aretina pesta io tovolahy io. Nandritra ny fisavana nataon’ny mpitsabo tao amin’ny CsbII sy ny mpitandro filaminana tao an-toerana dia fantatra fa namono tena tamin’ny poizina izy. Fotoana vitsy taorian’ny fahavitan’ny fitsirihana rehetra dia tonga ihany koa ny fianakaviana mba haka ny razana. Manoloana izay zava-nitranga izay àry dia namoaka fanambarana ireto fianakaviana fa manana olana goavana ao an-tokantrano ralehilahy ka izany no mety ho nahatonga azy nanao izao famonoana tena izao. Nomarihan’izy ireo fa tsy nody an-trano izy io nanomboka tamin’ny zoma alina lasa teo iny ka ny fatiny sisa no hitan’ny fianakaviana ny maraina. Hatreto aloha dia mbola eo am-panaovana famotorana lalina ny eo anivon’ny mpitandro filaminana. Na efa voaporofon’ny mpitsabo aza ny nahafaty ity lehilahy ity dia mbola mametraka fanahiana ihany ireto fianakaviana, sao misy antony hafa. Andrasana hatreto ny fivoaran’ny famotorana.